August 1, 2021 - Achawlaymyar
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာဦးတင်မောင်ဦး ကို ဗစ် ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်
August 1, 2021 by Achawlaymyar
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာဦးတင်မောင်ဦး ကို ဗစ် ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် ယနေ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာဦးတင်မောင်ဦး ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် 😢 သရုပ်​ဆောင် ​ပြေတီဦး၏ ဖခင် ​ဒေါက်တာဦးတင်​မောင်ဦး အသက်၇၄နှစ် ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွား​ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ “မလုပ်ပေးလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ နောင်တ စိုးစဉ်းမှ မရှိစွာနဲ့ သမီးတတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်.. ကံကြမ္မာကိုတော့ ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဖေ..။ အဖေကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် အဖေ လဲ နောင်တကင်းစွာ လက်ခံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.။ သိလို့ဖြစ်စေ မသိလို့ဖြစ်စေ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ နဲ့ ပစ်မှားမိခဲ့ဖူးတဲ့ အပြစ်တိုင်းအတွက် ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ကန်တော့လိုက်ပါ တယ်..။ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူပါတော့.”လို့ ငွေတီဦးက လူမူကွန်ယက်မှာဖခင် ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ်ဦးတီရေ😔 … Read more
ဒီတခါတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ရုပ်သံလေးတခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်…
မင်္ဂလာပါ စာဖတ်သူတို့ရေ … ဒီတခါတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ရုပ်သံလေးတခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်… ဒါကတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ … နေရာကတော့ ဖားကန့်နယ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တွင်းတခုမှာပါ အဖြစ်ပျက်ကတော့ ကျောက်တူးဖို့ ပေါက်ပြားနဲ့တူးတဲ့အခါ မြေကြီးထဲမှ မီးတွေ ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ် စာဖတ်သူတို့ အထင်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ ရုပ်သံကြည့်ရန် Credit Zawgyi မဂၤလာပါ စာဖတ္သူတို႔ေရ … ဒီတခါေတာ့ ထူးဆန္းတဲ့ ႐ုပ္သံေလးတခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္… ဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာပါ … ေနရာကေတာ့ ဖားကန႔္နယ္မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္တြင္းတခုမွာပါ အျဖစ္ပ်က္ကေတာ့ ေက်ာက္တူးဖို႔ ေပါက္ျပားနဲ႔တူးတဲ့အခါ ေျမႀကီးထဲမွ မီးေတြ ထြက္လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္ စာဖတ္သူတို႔ … Read more
အဖျားပျောက်ပီး အနံ့တွေပြန်ရပီးမှ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားရခြင်းအကြောင်းအရင်း(အထူးဂရုစိုက်ကြပါ)
August 2, 2021 August 1, 2021 by Achawlaymyar
အဖျားပျောက်ပီး အနံ့တွေပြန်ရပီးမှ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားရခြင်းအကြောင်းအရင်း(အထူးဂရုစိုက်ကြပါ) *** ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ခရီးထွက်တာ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ *** ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ အားကစား လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့။ *** ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ဝရံတာထွက်ပြီးအအေးခံတာ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ *** ကိုဗစ်ကနလန်ထပြီးချိန်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမှု လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ စင်ကာပူမှာအသက် (၄၁) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကိုဗစ်ကနေပြန်ကောင်းလာပြီး ဆေးရုံဆင်းတာနှစ်ပတ်ကျော်ပြီးမှ အဆုတ်မှာသွေးခဲပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆုတ်ထဲက pulmonary arteryထဲမှာ thromboembolism သွေးခဲလေးကသွားပိတ်တာပေါ့ဗျာ။ စင်ကာပူ NTU တက္ကသိုလ်က သုသေသနပညာရှင်များဟာ ကိုဗစ်ကနေပြန်ကောင်းလာတာ တစ်လလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လူနာအ ယောက် (၃၀) ကို သွေးနမူနာယူစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံဂျာနယ် eLife မှာတင်ပြထားရာမှာ အဲ့ဒီလူနာအယောက် (၃၀) စလုံးမှာ သွေးကြောတွေပျက်စီးထားတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒါဟာ ကိုဗစ်ကိုပြန်တိုက်ရင်း lingering immune … Read more
ကိုဗစ်နိုင်တဲ့ဆေးရွက်ပေါ်လာပါပီ အားလုံးကို သုံးစွဲနည်းလေး မျှဝေချင်ပါတယ်…
ဒီေဆးနည္းေလးကေတာ့ ကုိယ္ေတြ႔ခ်က္ခ်င္းသိသာခဲ့လို႔ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ကုိဗစ္ေရာဂါကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကတဲ့သူမ်ားလဲ အမ်ားသားမုိ႔ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေဆးနည္းမ်ားလဲ အမ်ားသားေတြ႔ရပါတယ္ ဒါနည္းကလဲ ကုိဗစ္ကုိ သက္သာေစတဲ့နည္းမ်ားထဲက တစ္ခုလုိ႔ပဲ မွတ္ယူျပီး လုိအပ္ပါက သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ပါ ကိုဗစ္နိုင္တဲ့ေဆးရြက္ေပၚလာပါပီ ေဆးအမည္ ဗီးဇက္ရြက္(ေဖာ့ရြက္လုိ႔လဲေခၚၾကတယ္)ေဒသအလုိက္အေခၚအေ ဝၚကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္ ဗီးဇက္ရြက္ကိုလကၻက္ဇြန္းေသး၂ ဇြန္းမၽွသာေသာက္သုံးရန္ အခ်ိဳးစားကေတာ့ ၃ ခြက္ ၁ ခြက္ ႀကိဳ၍ေသာက္ၾကည့္ပါ ခ်က္ခ်င္းသိသာလာပါလိမ့္မယ္… အားလုံးပဲက်မ္းမာျပီး ကုိဗစ္ေရာဂါဆိုးၾကီးမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ…။Crd Unicode ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ ကိုယ်တွေ့ချက်ချင်းသိသာခဲ့လို့ မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကို ဖြတ်ကျော်နေကြတဲ့သူများလဲ အများသားမို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆေးနည်းများလဲ အများသားတွေ့ရပါတယ် ဒါနည်းကလဲ ကိုဗစ်ကို သက်သာစေတဲ့နည်းများထဲက တစ်ခုလို့ပဲ မှတ်ယူပြီး လိုအပ်ပါက သုံးစွဲနိုင်အောင်ပါ ကိုဗစ်နိုင်တဲ့ဆေးရွက်ပေါ်လာပါပီ ဆေးအမည် ဗီးဇက်ရွက် ဒေသအလိုက်အခေါ်အဝေါ်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ် ဗီးဇက်ရွက်ကိုလက္ဘက်ဇွန်းသေး၂ … Read more
ဆရာဝန်မကြီးသတိပေးနေပြီ.. အရေးကြီးပါသည် ကာကွယ်ကြပါ အနံ့မရသူD6I4G…သန္ဓေပြောင်း..ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ…ကူးစက်…၁၀..ဆ..မြန်နေပါသည်.. ကာကွယ်ထားပါ….တစ်ခုချင်း..တင်ပြပါမည်…. ၁…အားဆေး….ဗီတာမင်..အီး…စီ….ဒီ…သောက်ထားပါ… ၂…အဖျားဝင်မလိုဖြစ်ရင်….ပါရာစီတမော့…တစ်ရက်..၃..ကြိမ်သောက်ပါ…. ချောင်းဆိုးပြီဆိုရင်….ဒက်စထရိုမီသောဖန်..အိုင်ဗျူ ပရိုဖန်…ဆေးအညွန်းအတိုင်းသောက်ပါ… ၃…..ဆားရေ..အာလုပ်ကျင်း…ရေနွေးသောက်..ရေနွေးသောက်ရင်း…အငွေ့ကို..ရှူ..သွင်းပါ…အခိုး..အငွေ့ အငံ..အစပ်..ဓာတ်နဲ့တွေ့ ရင်..ဝင်နေတဲ့..ပိုး.သေပါတယ်.. ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို….နိုင်တဲ့..ဓာတ်ပါ..အပူ..ဓာတ်ပိုကြောက်တယ်…. အဆုတ်..မရောက်ဖို့ ..ဒီနည်းပဲ..ရှိပါသည် ဗိုင်းရပ်စ်သည်..အဆုတ်ကို တိုက်ခိုက်ပါသည်…. အဆုတ်နဲ့…လေပြွန်လမ်းကြောင်းတွေကို..ထူထဲတဲ့..ချွဲသလိပ်တွေနဲ့…ပိတ်ဆို့ပြီး.အစိုင်အခဲဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှု လမ်းကြောင်းကို..ပိတ်ဆို့စေပါတယ်….. ဗိုင်းရပ်စ်သည်…ဘယ်ကဝင်ဝင်ဝင်..လည်ချောင်းတွင်း…၄..ရက်ခန့်ကြာ နေထိုင်ပါသည်….. ထို့ကြောင့်…ပူသောအရည်ကော်ဖီ….စွပ်ပြုတ်..ရေနွေးများများ..သောက်ပြီး..ကာကွယ်ပါ….. ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအစာအိမ်ထဲသို့ပို့ကာ အက်ဆစ်များဖြင့်အစာခြေခြင်းဖြင့်…အဆုတ်ထဲမဝင်အောင်..တားဆီးပေးပါလိမ့်မည်…. ဖြစ်နိုင်ရင်…ရှာလကာရည်..သံပုရာရည်…လိမ္မော်ရည်…ဆားထည့်..ရေနွေးပူပူ..ဖြင့်.သောက်ပေးပါ တစ်ရက်..တစ်ကြိမ်လောက်သောက်ပေးပါ ထမင်းရင်…ကြက်သွန်ဖြူ…ကြက်သွန်နီ… အစိမ်းမြုပ်စားပါ..အပူ..အခိုး.အငွေ့ဓာတ်သည်..ဗိုင်းရပ်စ်ကို..နိုင်သည့်..ဓာတ်ဖြစ်ပါသည် အနံ့မရ..ဖြစ်လာပြီဆိုရင်..ဆရာဝန်ပြ..ရမှာ ဖြစ်ပါသည်… ထို့ကြောင့်..မိမိကိုယ်ကို…ကာကွယ်ရင်း..ဆရာဝန်.. ဆရာမ.. ကျန်းမာရေး…ဝန်ထမ်းများကို..ကူညီကြပါစို့လို့အမျိုးတွေအား တင်ပြ လိုက်ပါသည်…ရှင်….. ကျွန်မ..ဗိုင်းရပ်စ်.ကို…၄..လ..တိတိ..တိုက်ပွဲဝင်..ကုသ ပေးခဲ့ရသူခွဲစိတ်..အထူးကု..နောက်ဆုံးနှစ်ကဒေါက်တာနန်းခင်ညွန့်ပါရှင် အမျိုးများအားလုံးအခုဒီပိုစ့်လေးကိုအများသိစေချင်လို့ပါ Share ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် Crd. THKKL Zawgyi ဆရာဝန္မႀကီးသတိေပးေနၿပီ.. အေရးႀကီးပါသည္ ကာကြယ္ၾကပါ အနံ႔မရသူD6I4G…သေႏၶေျပာင္း..ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ…ကူးစက္…၁၀..ဆ..ျမန္ေနပါသည္.. ကာကြယ္ထားပါ….တစ္ခုခ်င္း..တင္ျပပါမည္…. ၁…အားေဆး….ဗီတာမင္..အီး…စီ….ဒီ…ေသာက္ထားပါ… ၂…အဖ်ားဝင္မလိုျဖစ္ရင္….ပါရာစီတေမာ့…တစ္ရက္..၃..ႀကိမ္ေသာက္ပါ…. ေခ်ာင္းဆိုးၿပီဆိုရင္….ဒက္စထ႐ိုမီေသာဖန္..အိုင္ဗ်ဴ ပ႐ိုဖန္…ေဆးအၫြန္းအတိုင္းေသာက္ပါ… ၃…..ဆားေရ..အာလုပ္က်င္း…ေရေႏြးေသာက္..ေရေႏြးေသာက္ရင္း…အေငြ႕ကို..ရႉ..သြင္းပါ…အခိုး..အေငြ႕ အငံ..အစပ္..ဓာတ္ … Read more
ကျောင်းသွားတိုင်း မသန်စွမ်းတဲ့ညီငယ်လေးကို ပွေ့ချီပြီး အမြဲကျောင်းတက်နေရတဲ့ ကောင်လေး ကျောင်းသားအတော်များများက အားလပ်အချိန်မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားခွင့်ရခဲ့ကြပေမဲ့လည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် 11 နှစ်အရွယ် Alxis Peralta အမည်ရှိတဲ့ ကောင်လေးကတော့4နှစ်အရွယ် မသန်စွမ်းညီငယ်လေး AJ ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရ တာပါ ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ Alxis ရဲ့ ပထွေးဖြစ်သူဟာ AJ က သူ့သားအရင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်း လုံးဝတာဝန်မယူတဲ့အပြင် ၊ သူတို့ကို မကျွေးမွေးခဲ့ပါ ဘူး ။မိခင်ဖြစ်သူကတော့ အငယ်ဆုံးကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ မြို့တက်ပြီး အိမ်ဖော်အလုပ်ဝင်လုပ်နေခဲ့တာပါ ။ ကျောင်းသို့3km ခန့် လမ်းလျှောက်ပြီး ကျောင်းတက်ရလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နတဲ့ Alxis တို့ညီအစ်ကိုအဖြစ်ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးက မ ကြည့်ရက်ပဲ ကျောင်းရဲ့ရုံခန်းတစ်ခုမှာ နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့လို့ … Read more
ေန႔တိုင္းသုံး တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကို ေရေႏြး စိမ္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ၾကပါ)
ေန႔တိုင္းသုံး တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကို ေရေႏြး စိမ္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ..(အားလုံးပဲ သတိထား ၾကပါ) ျမန္ မာျပည္က ေငြစကၠဴမ်ား။အိတ္ကပ္ထဲကအႏၲရာယ္ေကာင္။ သူတို႔ဆီကေနလည္း Covid 19 က ကူးမယ္ဆိုတာ မယုံစရာမရွိပါဘူး။ ပိုက္ဆံေပၚမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က ၉ ရက္ေလာက္ ေနနိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္…။ ခုပို က္ဆံေတြဆိုရင္ သိပ္ၿပီးညစ္ႏြမ္းေနတာေတြ မပါေသးပါဘူး။ ဒါေတာင္ေရေႏြးနဲ႔စိမ္လိုက္တာမွာ အဲ့ေလာက္ညစ္ေနပါတယ္။ ေငြကိုလက္နဲ႔မကိုင္ပါနဲ႔…။ ျပန္အမ္းေငြမကိုင္ရေအာင္ ကို‌ယ္ေပးတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ အစြန္းထြက္မလိုအျပတ္ဝယ္တာပိုေကာင္းပါတယ္…။ ကိုယ္ဝယ္တာ 2700 ဆိုရင္ 3000ဖိုးအျပည့္ တခုခုဝယ္လိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။ တတ္နိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ cashless သြားပါ။ ခုေလာေလာဆယ္ အိမ္ထဲတင္မက အိပ္ကပ္ထဲပါ ဝင္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ေကာင္ပါ…။ CREDIT ========== Unicode ေန႔တိုင္းသုံး တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ကို ေရေႏြး … Read more
မုတ်သုန်လေအားကောင်းနေပြီး နောက်(၂)ရက်အတွက် မိုးကြီးနိုင်သော ဒေသများ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေအားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင် ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျ ရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၃၀)မှ (၃၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန် မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၇)ပေမှ (၁၀)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ … Read more